AKHRISO: Somaliland oo sharuudo ku xirtay la hadalka DF Soomaaliya, shaaciseyna in ay diyaar tahay.
HARGEYSA(P-TIMES) – Sidda lagu cadeeyey Warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland, waxay shaacisay Somaliland in ay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho dawladda Faderaalka Soomaaliya, iyadoo waliba ku sii xirtay sharuudo ay horey marar badan u soo jeedisay.
Somaliland, waxay sheegtay in ay ogoshahay in wada hadaladaas ay yeeshaan waxyaabo cad-cad oo ah go`aamada masiiriga ah, sidaas oo kalena ay tahay in xubnaha matalaya dawladda Faderaalka aysan ku jiri karin cid kasoo jeeda Somaliland.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed goordhaweyd ay soo saareen golaha wasiirrada oo ay ku go’aamiyeen qodobadan;
“1) In Somaliland ay diyaar u tahay in ay sii socdaan wadahadalada u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya kana qabsoomaan goob dhexdhexaad ah yeeshaanna Ajendayaal cad-cad oo taabanaya arrimaha masiiriga ah, beesha caalamkuna dhexdhexaadiyaal (mediators) ka yihiin, sidoo kalena la helo damanaad-qaad (grantors) rasmi ah si aan dhinacna uga bixin wixii lagu heshiiyo.
5) Dhammaan qoraalada (documents) mashaariicaha ay hay’aduhu ka fulinayaan Somaliland waa in ay u isticmaalaan magaca, khariirada, astaanta iyo calanka Somaliland leedahay ee gaarka u ah, waxa reeban inaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland laga fulin Karin mashaariic aan heshiiskooda lala gelin dalka Somaliland, sidoo kale cidna ma fulin karto mashaariic aan ogolaanshahooda laga haysan hay’adda dawladdeed ay khusayso”.
Hadalka Somaliland ayaa kusoo aadaya iyadoo dhawaan dowladda Soomaaliya iyo Midowga Yurub ay kala saxiixdeen heshiis lagubhotumarinayo Waddooyinka Berbera iyo Muqdisho.
Who is Somalilander? is it by tribe or who is born in that part of Somalia?